သစ်ကောင်းအိမ်အတွက် ကဗျာ နှလုံးသား အားတိုးဆေး | MoeMaKa Burmese News & Media
March 5, 2013ကမာပုလဲ
နှလုံးသားကို အစားထိုး ကုသလို့ရတယ်
ကဗျာကို အစားထိုး လုပ်ယူလို့မရဘူး ဇော်ကြီး …။
မသေခင် ကဗျာတွေ ရေးနေကြရမှာပဲ ဇော်ကြီး …။
ကဗျာက ကဗျာလို နေပြီး
ငါတို့က ကဗျာထဲမှာ နေထိုင်ကြတယ်
ငတ်တယ် … ဆင်းရဲတယ် … လူအထင်အမြင်သေးတယ်
မဆန်းဘူး ဇော်ကြီး …။
သူမနဲ့ သူတို့ကို အထင်ကြီးခဲ့ကြ
သူတို့ကို ထောင်တန်းအကျခံပြီး ချစ်ခဲ့ကြ
၂၀၀၈၊ ၂၀၁၀ နဲ့ ၂၀၁၁ ကြားဖြတ်ကြီးကို
မထွေးနိုင် မမြိုနိုင် ခံစားချက်တွေ ကဗျာဖြစ်ခဲ့ကြ
ဒီခေတ်မှာ သံခင်းတမန်ခင်း အနမ်းတွေထဲ
တဏှာရာဂ စွက်နမ်းလို့ ရတယ်
အကျိုးစီးပွားတွေ ရင်းနှီးမြုပ်နှံလိုက်လို့ ရတယ်
မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီး ကမ္ဘာပတ်နေလို့ ရတယ်
အေး … ဒါပေမဲ့ … ဒါကို
ကဗျာကို ညာလို့မရဘူး ဇော်ကြီး …။
မင်းသေလဲ မြေကြီးပဲ ဖြစ်မယ်
ငါသေလဲ မြေကြီးပဲ ဖြစ်မယ်
ကဗျာတွေကတော့ မသေနိုင်ဘူး ရှင်တယ် ဇော်ကြီး …။
မင်း နှလုံးသား ကျန်းမာရေးမကောင်းဘူးဆိုတော့
ကဗျာစစ်စစ်တွေနဲ့ ကုသလိုက်စမ်းပါ ဇော်ကြီး …
ကဗျာနဲ့ နေထိုင်ပါ ဇော်ကြီး …
ကဗျာတွေအတိုင်း သစ္စာမြဲစေ ဇော်ကြီး …
မုန်းသင့်သူတွေကို မုန်းတတ်လို့ပဲ ဇော်ကြီးရေ … ။
နှလုံးသားကို အစားထိုးကုသလို့ ရတယ်
ကဗျာကို အစားထိုး လုပ်ယူလို့မရဘူး
သစ်ကောင်းအိမ်ဆိုတဲ့ကောင်ကိုလည်း အစားထိုးလို့မရဘူး ဇော်ကြီး … ။ ။
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:ကဗျာ, ကမာပုလဲ	Comments are closed.
ဗိုလ်ထက်မင်း - ကိုးကန့် MNDAA စခန်းတွေကို တိုက်ပြီးရင် ဘာဆက်လုပ်ကြမှာလဲ ? အပိုင်း(၁)	ဆောင်းလူ - သူမနှင့် ဘ၀ ...	အောင်ဝေး -ဒေါ်အောင် ဆ န်းစု ကြ ည် သို့ေ ချ ပ ချ က်	ဖိုးထက် - လူပါးဝသော စာအုပ်	ကာတွန်းအောင်မော် - သူတို့အထက်ရဲ့ အထက်က ကောင်	ဆောင်းလူ - အပြာကား	ကာတွန်း ATH - ဟောက်သံထွက်ပေါ် တို့လွှတ်တော်	ကိုသစ် (သီတဂူ) - ရေသန့်၊ လူသန့်၊ စိတ်မသန့်တသန့်	မြဒေါင်းနွယ် - သူမ၏ ချစ်သူ	HTC One M9 မိတ်ဆက်ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်	မိုးမခ Kindel Store
Fort Wayne Invitation to SUU Event MoeMaKa Online Store
စာပဒေသာ ကောက်စာများအချစ်အကြောင်း ပြောကြည့်ခြင်း (Aung Din)
အမုန်းပဒေသာပင်ကြီး ကချင်စာကို ချစ်ပါ၊ ကချင်စာပေကို မြတ်နိုးပါ